『暖秋』日月广场〡免税店旁〡4K巨幕投影|海口市中心|省委省改府|骑楼老老享乐会| - I-Airbnb
Haikou, Hainan, i-China
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-明
U-明 Ungumbungazi ovelele
Uma le ndawo igcwele, ungakwazi ukuskrola uye phansi bese uchofoza isithombe sami sephrofayili ukuze ubuke okuningi kwendawo yami Sawubona, ngiyaziqhenya ngokuba yindawo enhle yokuhlala phakathi nohambo lwakho Sithemba ukuthi lokhu kokuzithokozisa kuzokwenza uhambo lwakho lube ngcono futhi lube nenjongo eyengeziwe!
Eduze ne-Guoxing Avenue Sun Yue Square yi-Haikou Financial Center eya e-Sun Yue Square ne-Department Free Shop phakathi kwamamitha angu-800, phakathi nemizuzu engu-20 'ukushayela ukuya e-Haikou East Motor Station Meilan Airport, amakhilomitha angu-3 ukusuka e-Old riding Street ne-Yundong Library
【 Indawo yokuhlala ・ eyikhwalithi
】enhle, ingahlalisa izihlobo ezingu-2 zabantu abadala nabangane, ukuhamba ngaphandle kwenkinga, inani elihle lemali!
Ikamelo lokuphumula lihlomele i-ChiMi projection enejubane elikhulu le-Telecom broadband imidlalo ye-inthanethi.
Ikamelo linamanzi ashisayo wamahora angu-24, i-shower gel enophawu, i-shampoo, ama-toothpicks alahlwayo, amathawula alahlwayo, ama-combs alahlwayo, izinkomishi ezilahlwayo, nemishini yokomisa izinwele!
[Isevisi ecatshangelwe kahle]
Yonke indawo yangasese, akukho ukuxhumana nokuzingenisa, okulula futhi okusheshayo;
Ikhiphedi ehlakaniphile, shintsha kusuka esivakashini esisodwa kuya kwesinye, isevisi ecatshangelwayo, ukubhukha
Ngemva kwalokho, sizokuthumela iziqondiso zokungena, sikunikeze usizo ngangokunokwenzeka njengomngane, futhi sikusize ukuthi udle, uphuze futhi udlale e-Haikou. Isevisi yokunakekela indlu iyazingenela.
U明 Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Haikou namaphethelo